Jirid Af: 2013
Ciidda Adhxaa 1434 H
Isaga oona Ibraahiim taajiyaa salalka (xeerka ah) ee aqalka iyoba Ismaaciil [iyaga iyo aqalka oo ah Carabka (Lafta) ee Afka (Nafta) bay dhahaan]:
«Rabbigahayna! Naga yeel (inuu yahay aqal ku beegan kaaga), Adaa ahee Maqle iyo Oge.» 127.
«Rabbigahayna! Naga yeel kuwo kuu hogaaman (Muslim ah), durrayyaddahaynana kuwo kuu hogaaman, na tusna mansikyadahayna (habka cibaadada, habka fulinta xajjka iwm), nagana tawbadyeel, Adaa ahee Tawbad Yeele iyo Raxmadgaar Yeele.» 128.
«Rabbigahayna! Ka soo dhax saar Rasuul iyaga ka mid ah, oo u tiriya Aayaadkaaga oo bara Kitaabka iyo Garta, kuna dhaqa fariintaada, Adaa ahee Wayne iyo Garte.» 129.
Yaa ka jeesta Milladda Ibraahiim (Tolka Ruuxeed ee Ibraahiim) maahee qof nacasawbiyay naftiisa. Waxaynuna inagu ka soo dhax xulanay Dunidan, wuxuuna isagu ka mid yahay tan Aakhiro kuwa suuban. 130.
Waatuu Rabbigiisa (Ibraahiim) ku dhahay: «Islaamaw.» Wuxuu dhahay: «Waan u islaamay Rabbiga Caalamada (Kan leh Aqoon-aalada / Aqoontooyooyinka).» 131.
Suuradda Lo’da / Sacda. Qur’aanka (Afka) Carabka ah.
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 9:55
Tilmaamo: Aayado Qur'aan, Dabaaldagyo
Xalay waxaa isniintii i helay toban umuuroodee:
Asal gama’na ways iri haddana uurka kama aan seexan
indhahana kalama qaadi hayn aragna way muuqday
afka kama dhawaaqi hayn haddana aamus ma aan yeelan
ogaan uma qosli hayn oo haddana ilagyaday muuqday;
aradkana dad kuma wahashan hayn ururna waan joogay
albaabada, dushaasaan jiray aqalna waan jiifay;
istanbuuli cadar layma marin udugna way daaray.
Oon baa i dilay oo biyaan ku ag wareegi hayay.
Onkod iyo hilaac roobna waa nagu itaaleeyay
ufona dhibicba may wadin haddana awdahuu luli hayay
awaari ma nabin oo haddana wuu anfacay kaynta.
Anfariir xaluun baan hurdada oog la soo kacayee
ilankaan talaabada ku waday waan abaari hayee;
meeshaan abaarada ku tago aakhir bal aan dhawro.
Raage Ugaas Warfaa.
Istanbuuli cadar: Cadar Istanbuuliya
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 13:56
Ciidda Fidradda 1434 H
Ku soo dhawaw Fidro ay shidday bishayd,
ilayn hadda adeegga ugu wacanaa u jaalalkee.
Arooryawna oo eeg sida iyadoo doon qalina
uu culayssiiyay xamuul canbara.
أهـلاً بفِطْـرٍ قـد أضاء هـلالُـه *** فـالآنَ فاغْدُ على الصِّحاب وبَكِّـرِ
وانظـرْ إليـه كزَوْرَقٍ من فِضَّــةٍ *** قـد أثقلتْـهُ حمـولـةٌ من عَنْبَـرِ
Gabayaaga: Cabdullaahi bin Al-Muctazzi (247 H – 296 H).
Ka yimid: Maqaal ku wacan (العِيد في عَيْن الشُعَراء) ee shabakada: Saaid.net
W. Tarjamay: Samantar Maxammad Saciid.
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 11:02
Tilmaamo: Codadka Carabta, Dabaaldagyo, Maansooyin Tarjuman
Rabbigahayn, inagaa waxaynu maqalnay yeere ku yeera iimaanka «inaydu aamintaan Rabbigiina», oo waynu aaminnay. Rabbigahayn, ee noo dhaaf danbiyadayna, noona astur xumahayna, nooguna dhamaystir nolasha kuwa baarriga. (Suuratul Aali Cimraan:193)
Rabbigahayn, nana soo gaarsii waxaad nooga balamisay rasuuladaada, hanana dullaynin Maalinta Qiyaame; Adigaa dhaafin balankee. (Suuratul Aali Cimraan:194)
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 11:12
1958kii gumeeyteha ingiriiskaa si isbaddala kaga go’aan gaaray in Mustacmaradda Ingiriiska ee Dhulka Soomaali la siiyo madaxbanaanidayda, si uu uga hortago kacdoonka soomaalida ee qarannimo ee ku lidka ahaa hoosgeeynta Dhulal Soomaali (Soomaali Galbeed) Imberadooriyada Itoobiya; imberadooriyo ee uu gumeeysteha dhistay (Maxmiyad), kana dhigtay gumeeyste.
1958kii waana sanadkuu soo booqaday Dukiska ee Gloucester (Henry William Frederick Albert) mustacmaradda ama siday dhahaan “Maxmiyadda”; waana ninkuu Maxammad Xaajji Ismaaciil Maxamuud (ku naanaysnaa Balaayo Cas geeridiisa kahor; kadibna Barkhad Cas) ugula jeedaa gabaygiisa, isagoo u jawaabayay kalkuu walaalkiisa Aadan ugu wacay inuu ka qaybqaadto ku soo dhaweeynta dakadda dayuuradaha iyo munaasabooyinka dabaaldageed ay xukuumadda mustacmaradda u qabanqaabisay Dukiska.
Waan u imid, Waan u fiirsaday, Waan qabsaday.
ninkii indhaha tiray
ninkii aabehay adoonsaday
Haddaan ogahoonan ka aarsan karayn.
Haddaanan Aadanaw unuunka jarayn
Isagoo Iglan jooguu i diloo
Ushuu soo fidshaa i iimeeysoo
Waa taa aramidii i oofo tirtee
Asaag la’iyaa intaa i baddee
Horuu u yaqiin arliga kaynoo
Inankii taabo qaadaba wuu og yahoo
Ishaafaladtuu arlada ku yimidee
Waxii arinaan Ilaahay jaclayn
adimada ku oolin karayn
adduunyo ku iibin karayn
Aayaadka Qur’aanka waad aragtoo
indhaha ka qarshee
Arligii ka samroo adduun ma hayee
haddaanan, ikhyaar aqoontay, hadlayn
haddaanan eray qura shirkaa oranayn.
ninkii dhaqdee urursada
kan kalee eegayaa adduunka ka baxshee
raggana wuu ogaa horuu u arkee;
Ninkii ooridiisa u geeynayaw
in keega iyo shaahuu ku arkinee!
Iimawdee! Axankaaga waynee!
Libaaxa Aanas iyo Abaarso ka ciyay
Abuuriin lo’ joogtaa urisoo
ooday jabisaa intay u dhacdoo
anbada ka guraa idalkayda.
Waa isticmaarkii ciidayee
idinna u dabaaldagoo, ariyahay!
Ayaanu ninna oran Soomaalaan ahee
ordoo magacana ku iibsada!
Indhaha ka qarsha: indhaha ka jeedsada; Uurka ka diida. Tixda weertan ku jirtaa waxay ku raadraacan tahay xadiiska dhaha:
“Kiina arkaa falxun, haka saxo gacantiisa; haddaanan uu karin, haka yeelo carabkiisa; haddaanan uu karin, haka yeelo uurkiisa. Kaasna waa iimaanka kan ugu daciifan.”
عَنْ أبي سَعِيد الخُدْري، قالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرَإً، فَلْيُغَّيِرْهُ بِيَدِهِ
فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فيِلِسانِهِ؛
فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فبِقَلْبِهِ.
وَ ذَلِكَ أضْعَفُ ألإيْمَانِ. (رَوَاهُ مُسْلِم).
Adduunka ka baxsha: adduunka ka saarta.
Keega: doolshe ah
Aanas, Abaarso iyo Abuuriin: duleedka Hargeeyso.
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 13:29
Waxay na siiyayn dhulka
Waxay na siiyayn dhulka waxaa ugu horaantii lagu daabacay tirsiga 2d ee majalladda Pan Juuliyo 1945kii, waxaana lagu daray ururiska sheekooyin gaabgaaban oo la magacbaxay El llano en llamas (Banka holacu ka baxayo) 1953kii. Buuggan iyo buug kale ee sheeko dheergaaban Pedro Páramo (1955kii) ayaa u ahawday qoreha meksikaanka Khuwaan Rulfo inuu naqodo kuwa ugu caansan qoreyaasha afka isbaanyoolka darta farshaxannimadiisa casriga. Saamaynta dagaanka soolxigaynka iyo farqiga wayn awoodeed u dhaxeeya xoogsadtada beeraleyda dhullaaweha iyo dhulleyda dhulgo’sadtada ay ku lehaayayn bulshada ayaa ah mawduuca sheekooyinkiisa. Kacaanka Meksiko (1910kii ilaa 1920kii) inkastuu soo yareeyay farqigaa, waxayse naqodtay in had iyo jeer goorta kacaanleydu isu rogtaa xukuumad ay cod u naqodto codadka xoogxoogan oo codadkii reer miyiga ugu ciidamayay kacaanka naf iyo neefafba ay ku cod beelaan. U sacodaalka kuwan danbe ee xagga balanka kacaanka waa waxay ku saabsan tahay sheekadan gaaban ee cinwaanka kajanka leh.
Kadib saacado badan ee soo sacosho ee aynu la kulmin har ee geedba, iniin ee geedba, xidid ee waxba, waxaa la maqlaa qaylinta ayaha.
Qofku wuxuu moodayay marmar, inta lagu soo dhaxjiray jidkan banka ah, inaan waxba ka jiri doonin gadaal; inaan lagala kulmi karin waxba dhinaca kale ee dhamaadka bankan la jarjaran dildilaac iyo jeexyo engagan. Laakiin haahay, waxaa ka jira. Waxaa ku taala tuulo. Waxaa la maqlaa inay ciyayaan ayahu, waxaana laga soo ursadaa hawada qiiqa, waxaana laga soo ursadaa qiiqaa ee dadka sidii isagoo ahaa rajo.
Tuuladuse wali waa fog tahay. Waa dabaysha tan soo durkisa.
Waxaynu sacod kula imanaynay ilaa waabarigii. Haddaytadan waa in le’eg afartii galabnimo. Qofaa wajiga u baxiya cirka, indhaha u jiida meesha qoraxdu suran tahay oo yiraa:
— Waa in le’eg afartii galabnimo.
Qofkaa waa Melitón. Ku jira isagu, waxaynu ku saconaa Faustino, Esteban iyo aniga. Waxaynu nahay afar. Anigaa tiriya: labo hore, labo kale gadaal. Waxaan fiiriyaa gadaal danbe oo ma arki qofna. Deedto waxaan is iraa: «Waxaynu nahay afar.» In dhawayd, abaaraha kaw iyo tobankii, waxaynu ahayn labaadtanaad; laakiin kis kisay u kala sii go’go’ayayn ilaa ay ka harayn waxaan ka badnaynin intan inaga ah.
Faustino baa yiraa:
— Laga yaabaa in roob da’aa.
Gadi waxaynu kor ugu qaadnaa wajiga oo fiirinaa daruur madaw ee culus oo naga dulmaraysa madaxa. Waxaynuna ku fikirnaa: «Waa laga yaabaa.»
Ma niraahno waxaynu ku fikirno. Muddo horay hadal-rabidddii naga tagtay. Waxaa naga qabsaday kulaylka. Qofku waa kula sheekaysan lehaa jeelnimo meel kale, halkanse waa ku hawl adayg. Qofka ku sheekaystaa halkan erayadaaba ugu kululaada afka kulaylka dibada dartiisa, waxayna kula qalalaan carabkiisa ilaa uu ugu danbeeyaa hiinraag. Halkan waa saa arimahu. Saa dartayd qofna ma qababdto sheekaysi.
Waxaa soo dhacda dhibic biyo, wayn oo buuran, oo ka samaysa dalool dhulka, dibna ugu dhaafta qoosh ah sidii cantuufo mar la soo tufay. Waxay la soo dhacdaa kali. Inagu Waxaynu sugnaa inay soo dhacaan kuwo kale oo kula daydaynaa indhaha. Laakiin maba jiraan kuwo kale. Roob ma soo da’o. Haddayto haddii la fiiriyaa cirka waxaa la arkaa geeldoojeha oo ugu sii carara shishe dhaqso. Dabaysha ka timaadta tuuladaa ku biirta oo ka horgeeysa hoosaska buluugga ah ee gunburada. Dhibicda u soo dhacday gaf-ahaan waxaa laqa dhulka waxayna ku baaba’daa oonkiisa.
Yaa baloo dooni lehaa bankan aadka u wayn? Muxuu tari, yaa?
Waxaynu dib u qabsanay sacoshadii, waxaynu la joogsanay arkidda da’idda roobka. Roob ma soo da’in. – Haddayto, waxaynu dib u qabsanaa sacoshada. Waxaana igu soo dhaca inaynu soo saconay in ka badan intaynu saconaa. Waa fikirka igu soo dhaca. Hadduu roobka da’i lehaa, malaha waxaa igu soo dhaci lehaa fikrado kale. Wax kastaba, waan ogahay ilaa iyo intaan ahaa wiil, inaan arkin roob ku da’a waaqay banka, kan loo yaqaan roob da’id.
Maya, banka ma aho wax wax tara. Ma ka jiro bakayleba iyo shinbiroba toona. Ma ka jiro waxba. Aan ka ahaynin wax xoogaa geedo quraceed ildaran iyo meel ka meel leh caws caleemo qonbabay; aan ka ahaynin taa, ma ka jiro waxba.
Waa nakan halkanaynu saconaa, afartaynu. Hortii waxaynu fuulnayn fardo oo dhabarka babac noogu saarnaa qoriyo. Haddayto xataa qoriba ma sidano.
Anigu had iyo jeer waxaan ku fikiri jiray in middaa ee naga qaadidda qoriga ahayd miday yeelayn si fiican. Aaggan waa ku halis in hub lala warwareegaa. Waxay qofka ku dilaan digniin la’i, kalkayba arkaan isagoo la warwareega qoriga «Winchester-ka sodanka» oo xakameha ugu xirxiran. Laakiin fardahu waa arin kale. Haddaynu ku iman lehayn fardo waynuba dhandhansan lehayn biyaha cagaarka dhirta ku dulcawiran ee wabiga, oo kula tamashlayn lehayn calooshaynii dhabaha tuulada si ay noogu dagtaa cunada. Waynuba soo qabqaban lehayn arintaa, haddaynu haysan lehayn fardahaa dhan ee aynu lehaan jirnay. Laakiinse fardahii waxay nooga qaadayn sidii qoriyada.
Waxaan u jeestaa dhan kasta oo fiiriyaa banka. Intaa ee dhulaan waxba tarin. Waxaa la siibta qofku indhaha kalkay waayaan wax joojiya. Xoogaa bulacyo quraa ka soo taagta madaxa godadkooda, isla kalkayna dareemaan gubka qoraxday cararaan si ay ugu ganbandaan hooska dhagax. Inaguse, kalkay tahay inaynu ka shaqaysanaa halkan, maxaynu yeelnaa si aynu isaga qabawjinaa qoraxda, yaa? Maxay inaga noo siiyayn qolaftan dhuleed ee didibka si aynu wax ugu abuuranaa? Waxay nagu yiraahdayn:
— Tuulada ilaa inta idinkaa leh. Inagaa warsana:
— Ma banka?
— Haa, banka. Gabi banka wayn.
Inagu waxaynu ka qabanaa dibinta inaynu niraa banka maynu rabin. Inaynu rabnay inta xigtay wabiga. Wabiga iyo ka shishe, aagga dhoobayda, meeshay ku yaalaan geedahaa ku magacawban casuarinas iyo daaqa iyo dhulka wanaagan. Mayase haraggan adag ee saca ee lagu magacawbaa Banka.
Laakin mayan noo dhaafin inaynu waxaynu sheeganaa. Wakiilka ma u imanin inuu nala hadlaa. Wuxuu naga saaray waraaqaha gacanta oo yiri:
— Ha ka cabsanina inaydu leedahiin intaa dhul oo dhan idinka qura.
— Ee banku, mudane wakiil...
— Waa kumaan kun ee jibaalo.
— Laakiin ma leho biyo. Xataa wax kabo ah.
— Canbaarkana? Qofna ma idinku oranin waxaa la idin siin lehaa dhulal waraab leh. Kalkuuba halkaa ka da’aa roobka, waxay u soo baxdaa galaydu sidii iyadoo mar la soo jiiday.
— Laakiin, mudane wakiil, dhulku nabaadguur iyo cag-adayg waaye. Ma u malayno in irfidu gali kartaa halkaa, kaawaduu iska yahay Banku dartayda. Waa in lagu daldalooliyaa garwayn si miraha loogu beeraa, xataana sidaa ma ku suurawdo inuu ka soo baxaa waxba; galayba iyo waxba toona ma ka soo dhalan doonto.
— Taa ku cadeeya qoraal. Haddana, jidkiina qabta. Waa dhulgo’sadtada kuwa ah inaydu ku duushaan, mayase xagga dawladda idin siisa dhulka.
— Noo kaadi, mudane wakiil. Inagu ma oranin wax ku lidsan Dawladda Dhaxe. Waxuba dhan wuxuu ku lidsan yahay banka… laguma lid naqon karo waxaan lagu lid naqon karin. Taa waa waxaynu niri… noola kaadi si aynu kuugu sharaxnaa. Fiiri, aynu ka soo bilawno meeshaynu isla joognay…
Isaguse ma rabin inuu na maqlaa.
Sidaa bay noo siiyayn dhulkan. Birtaawadanna kululay rabaan inaynu ku abuurnaa miro ee waxuun, bal haddiiba uu wax ka soo fufaa oo ka soo koraa. Laakiin waxba ma ka kori doono inta. Xataaba coomaadiga madaw. Waxaa lagu arkaa halkaa ee cirbarka goorba goor, isagoo aad u biibaya oo isku dayaya inuu kaga baxsadaa sida ugu dhaqsada miiran carocaddan habaaska iyo cag-adaygga ah, meeshaan waxna ka dhaqdhaqaaqin iyo meesha qofku kula saconayo gadaal gadaal. Melitón baa yiraa:
— Kan waa dhulkay na siiyayn. Faustino baa yiraa:
Aniga ma iraahdi waxba. Waxaan ku fikiraa anigu: «Melitón waxaa ka tagay miyirka, waa inuu ahaadaa kulaylka waxa uga hadalsiiya sidaa. Kulaylka uga soo dhaxdusay koofiyadda oo ka kululeeyay madaxa. Hadduu ahayninna, muxuu u yiraa wuxuu yiraahdo? Dhulkee na siiyayn, Melitón? Meeshan ma ka jirto xataa inta ugu yaray u baahan lehayd dabayshu si ay ugu dheeldheeshaa cirboorta.»
Melitón baa kal kale yiraa:
— Waxuu tari doonaa. Wuu tari wax xataa hadday naqodtaa xeray geenyahu ku dhaxrooraan.
— Geenyahee? — baa warsada Esteban.
Anigu ma u yeelanin dhug fiican Esteban. Haddayto ee uu hadlaa, dhugaan u yeeshaa. Wuxuu gashan yahay jaakad ugu timaadta xundhurta, hoosta jaakaddana waxaa madaxa ka soo baxsada wax dooro u eg.
Haahay, waa dooro guduudan tan uu Esteban ku sidtaa hoosta jaakadda. Waxaa lagu arkaa indhaha oo u daboolan iyo afka oo u furan sidii iyadoo hamaansanaysay. Aniga waxaan warsadaa:
— War hooy, Teban, halkee ka soo dhacsadtay dooradaa?
— Waa tayda! — buu yiraa.
— Ma sidanin hortii. Halkee ka soo gadadtay, yaa?
— Ma soo gadanin ee dooradayda waaye.
— Marka, jidmar-ahaan baad u soo kaxaysadtay, miyaa?
— Maya, waxaan u soo kaxaystaa inaan ilaalsado. Gurigayga waa ka cidla’ naqoday qof siin lehaa cuno; dartaa baan u soo kaxaystay. Had iyo jeer ee aan meel fog u soo baxaa waan soo xanbaarsadaa.
— Halkaa intay kuugu qarsan tahay neeftaa ku dhagi doonta. Kaaga fiican inaad u soo baxisaa hawada. Wuxuu ku hoosnabaa gacantiisa oo kula afuufaa neefta kulul ee afkiisa. Deedtuu yiraa:
— Waxaynu soo gaarnay dhaadhaca.
Anigu maba sii maqli wuxuu sii leeyahay Esteban. Waxaynu galnay saf si aynu uga dagnaa dagaandagga, isagaana ugu horeeya. Waxaa lagu arkaa isagoo ka qabsaday doorada lugaha oo hor iyo dib ugu ruxaya goorba si uu madaxa ugaga dhufanin dhagxaha.
Intaynu sii dagnaa, caradu waa sii fiicnaadtaa. Wuxuu boorku nooga soo kacaa cagaha sidii waxa ka sii daadagayay halkaa oo ahaa geedi dameero ah; laakiin waynu ka helnaa in boorku nagu dadmaa. Waynu ka helnaa. Kadib ku soo cagayntayna kaw iyo toban saac cag-adaygga banka, waxaynu ka dareennaa raaxo inagoo ku dhaxduuban waxa naga dulrablaya ee dhadhan dhul ah leh.
Wabiga korkiisa, dusha baararka cagaaran ee geedaha casuarinas, waxaa duula xayn midab cagaaran ee chachalacas. Taana waa waxaynu ka helnaa.
Haddayto cida ayaha waa laga maqlaa halkan, agtayada, waa dabaysha ee ka timaadta tuuladaa kula soo bafsiisa dagta oo ku wada fidisa qayladooda dhan.
Esteban dibuu xabadka ugu nabaa doorada kalkaynu soo gaarnaa guryaha ugu soo horeeya. Farahiisuu ka furfuraa lugahayda si uu uga kabuub baxiyaa, dabadaydna isaga iyo dooradiisa waxay ku libraan gadaasha ee geedaha tepemezquites.
— Halkanaan bari dhigtaa anigu! — buu nagu yiraa Esteban.
Inagu waxaan u sii saconaa hore, gudaha dhaxe ee tuulada.
Dhulkay na siiyayn waa korka halkaa.
W.Tarjamay: Samantar Maxammad Saciid
W.Qoray: Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo viscaíno
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 20:12